Fumana kwakhona uxwebhu lweLizwi kwiTemporary Iifayile
Ikhaya iimveliso DataNumen Word Repair Fumana kwakhona uxwebhu lweLizwi kwiTemporary Iifayile
usebenzisa DataNumen Word Repair Ukufumana kwakhona uxwebhu lweLizwi kwiTemporary Iifayile
Xa uxwebhu lwakho lweLizwi (*. IDOC okanye * .DOCX ifayile) lonakele okanye lonakele ngenxa yezizathu ezahlukeneyo kwaye awunakufumana idatha efunwayo kuyo. Ke ukusukela oko iMicrosoft Word iyakwenza itemporary iifayile xa kusenziwa uxwebhu, kusenokwenzeka ukubuyisa idatha kwiLizwi temporary iifayile, nge DataNumen Word Repair.
IMicrosoft Knowledgebase ichaza ulwazi oluneenkcukacha malunga netemporary Iifayile eziza kuzenza xa kusenziwa uxwebhu. Ke xa kwenzeka intlekele yedatha, unokulandela ulwazi ukufumana isantyarary ezinokuba nedatha eluncedo, emva koko usebenzise DataNumen Word Repair ukuskena kunye nokufumana kwakhona idatha kwezi fayile.
kungoku nje DataNumen Word Repair ixhasa ukubuyisa kwi tempo yewbkrary iifayile kunye.
Yexesha lewbkrary iifayile, ulwazi oluneenkcukacha lunokufumaneka kwi Apha. Ngokwesiqhelo iya kugcinwa kulawulo olulandelayo:
C: Amaxwebhu kunye noseto Idatha yokuSebenzisa iMicrosoftWord (yeeWindows XP)
C: Abasebenzisi AppDataRMicrosoft WindowsWord (yeeWindows 7)
Kwi-asd temporary iifayile, ulwazi oluneenkcukacha lunokufumaneka kwi Apha. Ngokwesiqhelo iya kugcinwa kulawulo olulandelayo:
Ukwenza ukubuyisa kwakhona, nceda ulandele la manyathelo angezantsi:
Phawula: Phambi kokuba uphinde ufumane itemporary Igama lefayile kunye DataNumen Word Repair, nceda uvale iMicrosoft Word kunye nezinye iinkqubo ezinokufikelela kwitemporary ifayile.
Khetha itempo eyonakeleyo okanye eyonakeleyorary ILizwi .tmp okanye .asd ifayile iza kulungiswa.
Ungafaka igalelo letemporary Igama .wbk okanye igama lefayile elikhethiweyo ngokuthe ngqo okanye ucofe i iqhosha kwaye khetha Zonke iiFayile (*.) njengohlobo lwefayile ukukhangela nokukhetha ifayile.
Ngokuzenzekela, DataNumen Word Repair iya kugcina ifayile yeLizwi emiselweyo njenge-xxxx_fixed.doc, apho i-xxxx ligama lomthombo weLizwi .doc fayile. Umzekelo, kwimvelaphi yetemporary Igama lefayile ngu ~ wrf0000.wbk, emva koko igama elisisiseko kwifayile esisigxina liya kuba ~ wrf0000_fixed.doc. Ukuba ufuna ukusebenzisa elinye igama, nceda ukhethe okanye usete ngokufanelekileyo:
nqakraza i iqhosha, kwaye DataNumen Word Repair Ndiza start ukuskena nokulungisa itempo yomthomborary Ifayile yegama. Inkqubela phambili yebha
Emva kwenkqubo yokulungisa, ukuba umthombo wetempilerary Igama lefayile linokulungiswa ngempumelelo, uya kubona ibhokisi yemiyalezo enje:
Phawula: Inguqulelo yedemo iya kubonisa le bhokisi yemiyalezo ilandelayo ukubonisa impumelelo yokubuyisela kwimeko yesiqhelo:
kwaye unokuvula ifayile esisigxina ukuze ubone uxwebhu olufunyenweyo. Ngokwencwadi ebuyiselweyo, unokwazi ukuba ngaba DataNumen Word Repair unokufumana kwakhona itempo yakhorary Igama lefayile ngempumelelo kwaye ufumane le nto uyifunayo. Nangona kunjalo, ingxelo yedemo ayizukugcina ifayile yeLizwi emiselweyo. Ndiyacela odola ingxelo epheleleyo ukufumana ifayile.